Gudoomiye Tarsan “Shabaab waxay qorsheynayaan in baalooyinka Nalalka inay qarxiyaan” – idalenews.com
Gudoomiye Tarsan “Shabaab waxay qorsheynayaan in baalooyinka Nalalka inay qarxiyaan”
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay horumarada iyo mashaariicda xilligan ka jira Gobolka, isagoo ka digay qorshe Al-Shabaab maleegayaan oo ah inay qarxiyaan baalooyinka nalalka ee lagu dhajiyay wadooyinka.
Tarsan ayaa sheegay in shacabka degmooyinka looga baahan yahay inay ilaashadaan, isagoo xusay in isaga aanay dan ugu jirn, balse uu dadka kala wadaago bilicda iyo quruxda magaalada sida uu yiri.
“Shabaab waxay rabaan in baalooyinka nalalka inay qarxiyaan, waxaa la rabaa in shacabka inuu ilaaliyo, aniga dan iguma jirto, dadka ayaa la wadaagaa, magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda”ayuu yiri Tarsan.
“Waxaa magaaladani ka jira horumar siyaabo kala duwan u socda, mid shacab iyo mid gobolka oo adeega bulshada ka mid ah, waxaa socda olole ballaaran oo dhismaha ah oo shacabka wadaan hadii ay ahaan laheyn guryahooda iyo goobahooda ganacsi, waxaa jira mid gobolka ku lug leeyahay, oo ah in bilicda la soo celiyo, jidadka in la hagaajiyo in baalooyinka cad ceeda ku shaqeeya laga hirgeliyo”ayuu yiri Tarsan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay jiraan caqabado ka hor imaanaya bilicda ka socda magaalada, isagoo ku eedeeyay inay jiraan dad wadooyinka hareerahooda dhisanaya, isla markaana bilicda magaalada xumeynaya.
Hadalkan ka soo yeeray Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya, iyadoo xilligan Muqdisho laga dareemayo is bedel dhinac bilicda ah, iyadoo dhismayaal casri ah laga hirgelinayo, halka wadooyinkana uu ku socdo dib u dhis, waxaana inta badan wadooyinka lagu dhajiyay baalayaal ku shaqeeya cad-ceeda oo iftiimiyay magaalada, taasoo suura gelisay in xilliyada habeenkii gawaarida ay dhex mushaaxaan wadooyinka.
Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo hawl galo ka sameeyay Shabeellaha Hoose, maxayse ka tiri Dowladda?
Meydadka dad horay howl galo lagu qabtay oo saaka lagu arkay Xaafada Gubta ee degmada Dayniile